मौलिकता कायम राख्दै यस्तो बन्यो सिंहदरबार, आज उद्घाटन ! « GDP Nepal
मौलिकता कायम राख्दै यस्तो बन्यो सिंहदरबार, आज उद्घाटन !
काठमाडौं । मुलुकको प्रमुख प्रशासकीय भवन सिंहदरवार पुनर्निर्माण पूरा भएको छ । २०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत रहेको देशको प्रमुख प्रशासनिकस्थल सिंहदरबारको पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको हो ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणद्वारा पुनःनिर्माण सम्पन्न पश्चिमबाहेकका तीनवटा मोहडाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार उ्दघाटन गर्ने कार्यक्रम छ । उद्घाटनपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय यही भवनमा सर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री ओली सिंहदरवारभित्र नौ महिनादेखि नगएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला चार दिनअघि यही भवन अवलोकनका लागि गएका थिए । ओलीले सचिवालयको सबै काम बालुवाटारबाटै गरिरहेका छन् ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले प्रबलीकरणमार्फत भवनलाई भूकम्पबाट सुरक्षितरूपमा पुनःनिर्माण गरिएको बताए । “हामीले मौलिक संरचना तथा शैलीलाई कायम राखी भूकम्प प्रतिरोधी हुने गरी पुनःनिर्माण गरेका छौँ, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवा सुविधा रहनेगरी हालको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मौजुदा सङ्गठन संरचनाअनुरूप कार्यकक्ष तथा बैठक कक्ष निर्माण गरिएको छ”, उनले भने ।
प्रकाशित : ३ फाल्गुन २०७७, सोमबार